Mareykanka Oo fariin cusub udiray Md Farmaajo & Gudoomiye Mursal – XAMAR POST
DEG DEG:- Madaxweynaha Hirshabelle oo caawa joowhar kula kulmay Sentaradii ku soo…
Mareykanka Oo fariin cusub udiray Md Farmaajo & Gudoomiye Mursal
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dalka Mareykanka ayaa ka codsatay Madaxweyne Farmaajo iyo Gudoonka Golaha Shacabka inay si deg deg ah u baabi’iyaan hindise sharciyeedka muddo kordhinta ahaa Ee 12-kii Bishaan La meel mariyey.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa waxay ku boggaadisay Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle sidii ay u diideen muddo kordhinta loo sameeyey Hay’adaha Federaalka.
Waxaa loogu baaqay Madaxda Dawladda Federaalka iyo Dawlad Gobolleedyada inay si deg deg ah u kulmaan si loo dhameystiro Hanaanka doorashada ee la isku raacsan yahay lana qabto doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha sida ugu dhaqsaha badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii la gaaray 17-kii September sanadkii hore.
Sida muuqata tani ayaa cadaadiska kusii kordhineysa Madaxtooyada Soomaaliya si ay ulaasho go’aankii labo sano ku darsiga ahaa ay 12-kii bishaan ay gaareen Golaha Shacabka Ee Hay’adaha Dawlada loogu daray.
Waxa la sugayaa kulanka Sabtida Ee Madaxweyanha Muddo Xilleedkiisa dhamaaday Farmaajo ku hortegayo Golaha Shacabka si looga laabto Qorshihii Muddo kordhinta ahaa ee la diiday.
Hanti dhowrihii Guud Ee Maamulka Jubbaland oo geeriyooday
Dhageyso: Xukuumada oo xeer usameneysa shirkadaha gaarka loo leeyahay
DEG DEG- Beesha Caalamka oo kubaaqay in Deg deg uxaliyaan khilaafka udhaxeeya Rasysul…
Viila Soomaliya oo ka hadashay in muqdisho ay ka soo degto…
DEG DEG- Diyaarad uu la socday Fahad Yaasiin oo dalka…
DEG DEG-AUN Bashiir Raage Shiiraar oo ka mid ahaa…